အီလက်ထရွန်နစ်မင်သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ဒ်ပါသော eReader ပုံစံရှိသော iPhone၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ | eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | hardware, NOTICIAS
ကျနော်တို့မှတ်ချက်ပေးတာဟာနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်သတင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသတင်းစာဆရာတစ် ဦး ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုမနေ့ကအစီရင်ခံခဲ့သည် E-Ink အီလက်ထရောနစ်မှင်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ပါသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု.
၎င်းသည် Apple fanboys မှသာမကအချက်အလက်များမှအချက်ပေးမှုများကိုပါဖယ်ရှားပေးသည် E-Ink သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှစ၍ စတော့ဈေးကွက်တွင်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤသမုဒ္ဒရာမှမည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ထွက်လာမည်ကိုမသိရသေးပါသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောပြည်ထောင်စုသည်တကယ်ထိရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်
E-ink မျက်နှာပြင်ပါသည့် iPhone သတင်းသည် E-Ink ၏ရှယ်ယာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်
အရာအားလုံးသောသတင်းအချက်အလက်ကနေလာပါတယ် အက်ပဲလ်သည် E-Ink မှထုတ်ကုန်နှင့်ထုတ်ကုန်များကိုမှာယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Yotaphone2ကဲ့သို့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါသည့် iPhone တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သို့သော်သတိအရှိဆုံးက၎င်းသည်ဒုတိယဖန်သားပြင်ကိုထည့်သွင်းမည့်တရားဝင်ကိစ္စရပ်များဆက်တိုက်ဖန်တီးမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုအတည်ပြုသည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပုံရသည် ထုတ်ကုန်အရင်းအမြစ်များ၏ verisimilitude အဖြစ်ပျံ့သည်, များစွာသောသူတို့က Daily Daily News တွင်ထုတ်ဝေသောမူလဇာတ်လမ်းသည်စိတ်မချရဟုဆိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ E-Ink ၏အစုရှယ်ယာများသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှစတင်၍ ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Amazon သည် Kindle Paperwhite ကိုစတင်မိတ်ဆက်သောအခါတွင်အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။
E-Ink မှ Apple မှာကြားထားသည့်ပစ္စည်းသည်အနာဂတ် Apple စီမံကိန်းများအတွက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ Apple ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့မင်းမှာနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်၊ အီလက်ထရောနစ်မင်နဲ့အတူ Kindle အစားအခြားရွေးချယ်စရာအိုင်ပက်ဒ်တွေတောင်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်အတွက်မဖြစ်နိုင်။ ပြီးတော့သင် သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? Apple က E-Ink မျက်နှာပြင်နဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုစတင်မယ်လို့ထင်ပါသလား။ ၎င်းသည်အိုင်ပက်ဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်လားသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်နှစ်လုံးပါသည့် iPhone လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » အီလက်ထရွန်နစ်မင်သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ဒ်ပါသော eReader ပုံစံရှိသော iPhone၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
Apple ereader တစ်ယောက်၏ကောလာဟလသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ငါမယုံဘူး အက်ပဲလ်ဟာအမှန်တရားကိုဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။
ဒန်ဘရောင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် Origins ဟုခေါ်သော e-book အသစ်တစ်ခုအတွက်အဆင်သင့်ရှိသည်